सामाजिक उद्यमशीलता – उदाउँदो नेपालको आवश्यकता – HamroKatha
सामाजिक उद्यमशीलता – उदाउँदो नेपालको आवश्यकता
भविष्यमा उदाउँदा सामाजिक उद्यमी भाइबहिनीहरूका लागी - सन्तोषी रानाको सन्देश
हाम्रो कथा २०७५ माघ १४ गते १५:०९
सामाजिक उद्यमशीलता के हो ?
यदि उद्यमशीलता मार्फत कुनै सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ भने त्यो सामाजिक उद्यमशीलता हो। जस्तै: आफ्नूले हस्तकलाको उद्यम गर्दा कुनै ग्रामीण भेगका महिलाहरूको लागी रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ, कुनै भूकम्प पीडित बस्तीका मान्छेहरूको घर चलाउन सकियो भने त्यो सामाजिक उद्यमशीलता हो I आफ्नो कामले समाजको हित हुनु पर्‍यो I सामाजिक परिवर्तन देखा पर्‍यो भने त्यो सामाजिक उद्यमशीलता हो।
तस्वीरमा: बिहानी सोसल भेन्चरकी संस्थापक सन्तोषी राना
हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख देशहरूमा सामाजिक उद्यमशीलताको निकै ठुलो आवश्यकता छ । अहिले त कतिपय कलेज, इन्स्टिच्युटहरूमा पनि सामाजिक उद्यमशीलताको प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको छ ।
उद्यमशीलता मार्फत समस्याको समाधान हुनु पर्‍यो
हामी समस्याको कुरा धेरै गर्छौँ । हो, यी समस्याहरूमा नै अवसरहरू हुन्छन् । त्यसैले, उद्यमशीलता हाम्रो आवश्यकता हो ।
सेक्टर अनुसार परिभाषित गर्न खोज्दा, विभाजित गर्न खोज्दा सकिँदैन । जस्तै म वृद्धाहरूको सेक्टरमा काम गर्छु । यस क्षेत्रमा पनि उद्यम गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन । अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा, कुनै सिच्वेसन / अवस्थामा आइपरेको समस्यालाईमा केन्द्रित रहेर समाधानको आविष्कार गर्ने व्यक्ति नै सच्चा उद्यमी हो ।
प्राय युवाहरूले गर्ने गल्ती,
“जस्तै मलाई एउटा आइडिया आयो I मलाई आफ्नो आइडिया प्रति यतिसम्म समर्पित र प्रतिबद्ध भई दिन्छु । यस्तो गर्नु पनि पूर्ण रूपले राम्रो होइन रहेछ। कहिले-कहीँ कुनै अवस्थामा एउटै आईडियामा मात्र घोत्लिदै बस्ने प्रविर्धिले पनि हामीलाई कुनै निश्चित सीमामा बाँध्न सक्छ । आफ्नो आइडियाको दायाँबायाँ के छ भन्ने बारे पनि चेत हुँदैन ।”
तस्वीरमा: World of KOLPA
त्यसैले, अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । उद्यम गर्नु अघि राम्रो अनुसन्धान गर्न सक्नु पर्छ । आफ्नूले सो-क्षेत्रमा उद्यम गरे के कुनै समस्याको समाधान हुन्छ ? के यस क्षेत्रलाई मेरो र मेरो कामको आवश्यकता छ ? के म अरूले सक्षमरुपमा दिई रहेको सेवा हुबहु दोहोर्याएर अफलदायी प्रतिस्पर्धाको सृजना त गरी रहेको छैन ? उद्यम सुरु गर्नु अघि यस्ता प्रश्नहरूको जबाफ खोज्नुपर्‍यो । अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस क्षेत्रमा के-कस्ता उद्यमीहरू छन्, उनीहरूले कसरी सुरु गरे, अन्य राष्ट्रमा यसको प्रतिफल कस्तो आयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
कुनै काम गर्दा, एक उद्यमीले सधैँ समानुभुतीको भावना बोकेर काम गर्नु पर्छ । अङ्ग्रेजीमा बुझ्दा “Empathy” (अरूको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा राखी) अरूको समस्या र परिस्थिति बुझ्न सक्नु पर्छ ।
तस्वीरमा: म: म: संसार
यदि आफूमा ‘चेन्ज मेकर’ बन्छु भन्ने भाव छ भने, अहिलेको समय नेपालमा उद्यमी बन्ने राम्रो समय पनि हो। देश सङ्घीयता तर्फ गइसकेको छ। देश विकसित हुँदै छ। त्यसैले, नयाँ काम र नयाँ समाधानको बजार देखा पर्न थालेको छ ।
जे-जस्तो परिस्थितिमा पनि समस्या र त्यसको समाधानमा केन्द्रित रहनु पर्छ
अहिले सरकारले उद्यमीहरूको लागी निकै सहयोग हुने गरी कर्जा, लगानी, कोषहरूको व्यवस्था मिलाउँदै गर्नु निकै खुसीको कुरा हो । तर, यसमा पनि ख्याल गर्नु पर्ने कुरा यदि तपाईँलाई आफ्नूले समाधान गर्न सक्ने समस्याको लागी लगानी, कर्जा अति आवश्यक भए मात्र कर्जा लिने हो I उदाहरण:- यदि मैले किशोरीहरूको समूहलाई ‘सेल्फ डिफेन्स’ ट्रेनिंग दिने काम गर्छु भने सायद मलाई त्यति धेरै लगानीको आवश्यकता नपर्ला।
त्यसैले, कर्जा लिने व्यवस्था छ वा लगानीकर्ता पाई रहेको छु भन्ने आधारमा चाहिँ उद्यम सुरु नगरौँ । लगानी प्राप्तिका आधारमा उद्यम सुरु गर्ने होइन। आफ्नू उद्यमलाई निकै आवश्यक पर्ने भए मात्र यस्ता कर्जा वा लगानीको माग गर्ने हो। समाजमा भएका समस्याहरूको समाधान निकाल्न उद्यमी बनौँ I त्यसपछि बल्ल, अन्य कुरा समय र परिस्थिति अनुसार सामना गर्दै जाने हो।
हामीलाई समस्तमा एउटा ठुलो फाइदा पनि छ,
नेपाल सानो देश हो I त्यसैले, उद्यमीहरूले ल्याएको परिवर्तनको प्रभाव राम्रो पर्न जान्छ I
तस्वीरमा: हाम्रो सैलुन